China High Quality PVC Coated Steel Wire umzi-mveliso kunye nababoneleli |XINTELI
High Quality PVC Coated Steel ngocingo
Izinto eziphathekayo: Intsimbi yeCarton ephantsi okanye ikhabhoni ephezulu
Umongo: Ucingo olumnyama, ucingo lwegalvanized yoMbane okanye iHot dipped wire.
Umbala:Kumnyama / kuluhlaza okhanyayo, mnyama / luhlaza okwesibhakabhaka, mhlophe, mnyama, tyheli, njl.
PVC ngocingoyenziwe ngocingo lwentsimbi olusemgangathweni njengezinto eziphathekayo, lunokwenziwa kwiimveliso zocingo ezahlukeneyo, ngaloo ndlela njengamaqhina entsimbi ephindwe kabini, intambo ye-rebar tie, ucingo olusikiweyo, ucingo oluhlabayo, ucingo lwe-pvc olugqunywe ngekhonkco lentsimbi, i-pvc egqunywe ngentsimbi yentsimbi enemesh.Etc
Umbala umkhombe / ukukhanya okuluhlaza, okumnyama / okuluhlaza okwesibhakabhaka, omhlophe, omnyama, otyheli, njl.
Phawula:Ubungakanani obungaphandle kobukhankanywe apha ngasentla bunokwenziwa ukuba buodolwe emva koqwalaselo.
I-diameter eyahlukileyo yocingo iya kwenziwa kwiikhoyili ezahlukeneyo zangaphakathi.
Iimpawu : Inepropathi echasene nokuguga kunye nobomi benkonzo obude xa kuthelekiswa neengcingo eziqhelekileyo ezenziwe ngamagalvanized.Inexabiso eliphantsi ngokwentelekiso, intle kwaye yomelele, ayigugi, ayinyangeki, kwaye ineempawu ezintle zokugquma.
Isicelo: Olona setyenziso ludumileyo lwePVC yocingo olugqunyiweyo kulwakhiwo lweengcingo zamatyathanga ocingo lwezokhuseleko lwemizi-mveliso, oohola bendlela kunye neenkundla zentenetya.Ikwasetyenziswa nakwezinye izicelo ezifana nezixhoma zedyasi kunye nezibambo.
Ukupakisha: isongelwe ngefilimu yeplastiki ngaphakathi, ilaphu le-hessian okanye ibhegi elukiweyo ngaphandle kwendlela yeNtlawulo: T / T, Advance TT, Paypal Etc.
Ngaphambili: Ucingo olufakwe igalvanized
Okulandelayo: IRazor Barbed Wire
1.6mm PVC Coated ngocingo lwentsimbi
Pvc Coated Iron ngocingo
pvc ucingo lwentsimbi
Umnatha owenziwe ngokweSiko owenziwe ngeHexagonal oX...
Umnatha odityanisiweyo gabion&hexagonal mesh gabion
I-Hexagonal yentsimbi yokuNatha ngocingo